अमेरिकामा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई एनआरएनएमा समेट्नका लागि मेरो उम्मेदवारी: दीपक हुमागाईँ (अन्तर्वार्ता ) - Texas Nepal News - Texas Nepal News
अमेरिकामा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई एनआरएनएमा समेट्नका लागि मेरो उम्मेदवारी: दीपक हुमागाईँ (अन्तर्वार्ता )
६ जेष्ठ २०७८, बिहीबार १९:४७
दीपक हुमागाईँ , बोर्ड अफ डाइरेक्टरको उम्मेदवार,एनआरएनए अमेरिका
बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा यहाँको उम्मेदवारी किन ?
पहिलो कुरा त अमेरिकामा ३ लाख नेपालीहरु रहेका छन् तर गैर आवासीय नेपाली संघ अमेरिकामा सदस्य २१ हजार जति मात्र छन् । हामी स्वतस्फुर्त रुपमा किन आउन सकिरहेका छैनौं । ती कारणहरु खोजी गरी ल्याउने प्रयास गर्छु । अमेरिकामा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई समेट्ने मेरो उदेश्य हो । अर्को कुरा उम्मेदवारहरुले असम्भव नाराहरु ल्याईरहनु हुन्छ । म चै त्यस्ता नाराहरु पन्छाउने काम गर्छु । तेस्रो कुरा निर्वाचन ताका समूह–समूह विरुद्धको लडाई हुन्छ, कहिलेकाही कुटाकुटकै अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ, यो कुरालाई चै म नियन्त्रण गर्न चाहान्छु ।
निवार्चन ताका उम्मेदवारहरुले अनावश्यक खर्च गर्ने परिपाटी रहेको छ । त्यो राम्रो हैन । बरु त्यही पैसा केही राम्रो कामको लागि उपयोग गर्न सकिन्छ । यसबारे सोच विचार गर्नु पर्यो भन्ने मेरो इच्छा हो
त्यस्तै नेपालीका लागि नेपाली भन्ने नारा छ तर त्यो हुनको लागि त सबैभन्दा पहिला आफैं नेपाली हुनु पर्यो नी । ती युवाहरुका लागि र दोस्रो पुस्ताका लागि हामीले जग बलियो बनाउनु पर्छ । उनीहरुको भविष्य बनाउन सक्यौं भने मात्र हामी सफल हुन्छौं । त्यसपक्षमा म लाग्नेछु । अनि निवार्चन ताका उम्मेदवारहरुले अनावश्यक खर्च गर्ने परिपाटी रहेको छ । त्यो राम्रो हैन । बरु त्यही पैसा केही राम्रो कामको लागि उपयोग गर्न सकिन्छ । यसबारे सोच विचार गर्नु पर्यो भन्ने मेरो इच्छा हो ।
यसअघि यहाँले कुनै संघसंस्था वा राजनीतिक संगठनमा काम गरेको अनुभव पनि छ कि ?
म विद्यार्थी बेला देखीनै राजनीति प्रति चासो राख्थे । विद्यार्थी संगठनहरुमा आबद्ध थिए । तत्कालीन गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा म गृह राज्यमन्त्रीको सल्लाहाकार बनेर पनि काम गरे । पछि १२ बुँदे सम्झौता मलाई मन परेन । मैले यो बिरुद्ध धेरै बोले । तयसपछि अमेरिका आएर विभिन्न विभिन्न सामाजीक संघसंस्थामा क्रियाशील छु ।
यो पार्टी, त्यो पार्टी नभनीकन मैले धैरै संघसंस्थाहरुलाई सहयोग गरे । जबसम्म स्वार्थ रहन्छ तबसम्म समाजसेवी बन्न सकिदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । यतीबेला म निस्वार्थ रुपमा समाजका लागि केही गर्न चाहान्छु ।
अमेरिकी नेपाली समुदायमा हालसम्म तपाईले गर्नु भएको योगदानहरु बारे बताइदिनुस न ?
मैले लोकल संघसंस्थाहरुमा बसेर काम गरेको छु । हामीले स्थापना गरेको लोकल अर्गनाइजेसन अहिले निकै माथि पुगेको छ । त्यहाँ म सधै पछाडि बसेर काम गरे । मैले जन्माएको संस्थामा मैले अरुलाई नै अध्यक्ष बनाए । मलाई काम गर्नु थियो, कुनै लोभ लालच थिएन । यो पार्टी, त्यो पार्टी नभनीकन मैले धैरै संघसंस्थाहरुलाई सहयोग गरे । जबसम्म स्वार्थ रहन्छ तबसम्म समाजसेवी बन्न सकिदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । यतीबेला म निस्वार्थ रुपमा समाजका लागि केही गर्न चाहान्छु ।
म के भन्न चाहान्छु भने उम्मेदवार सही हो की हैन भन्ने कुरा मतदाताहरुले आफैं पत्ता लगाउनु पर्यो । मतदाताहरुले अधिकार खोज्ने हो भने कर्तब्य पनि पूरा गर्नु पर्छ । उम्मेदवार सही वा गलत भन्ने चै मतदाताहरुले चिन्न सक्नु पर्छ ।
अन्त्यमा अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुलाई केहि अपिल गर्न चाहानुहुन्छ कि ?
थप ७ लाख २५ हजार डोज खोप नेपाल आइपुग्यो
कांग्रेस महाधिवेशन मंसिर ९ गते गर्ने निर्णय
प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिन ढिला गरे ‘असम्मानजनक बहिर्गमन’ हुन्छ : नेता पाैडेल
पहिलो चरण​मा चार लाख मतदाता थपिए, दोस्रो चरणको नामावली सङ्कलन हुँदै